Abuu Maazin Oo Kujira Dhabta Boqor Salmaanka Sacuudiga.
Monday November 06, 2017 - 19:09:44 in Wararka by Super Admin
Si lama filaan ah Hoggaamiyaha Ururka Fataax ee dhulka Filasdiin ayaa booqasho ugu tagay magaalada Riyadh ee wadanka Saudi Arabia.
Maxamuud Cabaas Abuu Maazin iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa booqasho aan horay loosii shaacin ku jooga wadanka Sacuudiga kadib markii uu martiqaad ka helay Salmaan Bin Cabdul Caziiz iyo wiilkiisa oo ah dhaxal sugaha koowaad ee talada la wareegi doono.
Abuu Maazin oo ku sugnaa magaalada Sharmal Sheekh ee loo nasada taga wadanka Masar ayaa hadda ku sugan qasriga Madaxtooyada magaalada Riyaadh sida ay faafisay wakaaladda wararka Sacuudiga.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Maxamuud Cabaas uu kulamo lagu sheegay xasaasi uu laleeyahay Madaxda ugu sarraysa Boqortooyada Sacuudiga, wararka qaar ayaa sheegaya in madaxda Aala Sacuud iyo Abuu Maazin islasoo qaadi doonaan heshiiskii kooxaha Filasdiiniyiinta ku dhaxmaray wadanka Masar ee sababay in Xamaas iyo Fatax ay Ghaza ka dhistaan maamul mideysan.
Warbaahinta carabta ayaa isla dhax qaadaysa suurtagalnimada iyo Madaxda Sacuudiga ay Maxamuud Cabaas ku qasbi doonaan iscasilaad si lamid ah amarkii ay sabtidii lasoo dhaafay siiyeen Sacad Alxiriiri R/wasaarihii xukuumadda dabadhilifka Lubnaan.
Dowladda Aala Sacuud ayaa isku dayaysa in isbedel dhanka maamulka ah ka hirgeliso mandiqadda reer galbeedku u bixiyeen bariga dhexe xilli isbedel dhan walba uu ka hirgalay dhulka Xarameynka waxaana laga cabsi qabaa in arrintan ay saameyn ku yeelato shacabka muslimiinta oo markii hore ladaalaa dhacayay caburinta uga imaanaysay kaligood taliyaasha dhawaaqiiida Carbeed.
Ciidamo Itoobiyaan iyo Jabuutiyaan Ah Oo Qaraxyo Lagula Beegsaday Duleedka Jalalaqsi.